ဘရာဇီးလျသား ဖရကျဒျကို ချေါယူရာမှာ မျောရငျဟိုရဲ့ ဆန်ဒ တကယျကောပါဝငျခဲ့လား ? - SPORTS MYANMAR
ဘရာဇီးလျသား ဖရကျဒျကို ချေါယူရာမှာ မျောရငျဟိုရဲ့ ဆန်ဒ တကယျကောပါဝငျခဲ့လား ?
ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ နှရောသီစြေးကှကျ အတှငျး မှာကှငျးလယျ လူ ဖရကျဒျကို ရှကျတာ ဒိုးနကျဈအသငျးကနေ ချေါယူထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး ဒီဘရာဇီးလျသားဟာ အခုခြိနျအထိ အိုးထရကျဖို့ဒျ မွမှော ခွစှေမျးကောငျးပွသနိုငျ့ခငျး မရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ယူကရိနျးမွမှော ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဖရကျဒျကို ချေါယူဖို့ အခွားဥရောပအခြို့ နဲ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့ရပွီး စုစုပေါငျး ပေါငျ ၅၂သနျးအထိတောငျပေးခထြေားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး ဒီလိုတနျကွေးနဲ့ ထိုကျတနျမှု မရှိတဲ့ ကစားသမားမြိုးကိုချေါယူခဲ့တဲ့ မျောရငျဟို အပျေါ ပွငျးပွငျးထနျထနျဝဖေနျခဲ့ကွသေးတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အမှနျ စငျစဈ မျောရငျဟို ကိုယျတိုငျကလညျး ဖရကျဒျကို ကွိုကျနှဈ သကျခွငျး မရှိပဲ အသငျးကနေ ချေါယူပေးခွငျးကို ခံခဲ့ရတာဖွဈတယျလို့ The Atletic သတငျးစာကဆိုပါတယျ။ဖရကျဒျဟာ ယူနိုကျတကျ အသငျးနဲ့ သငျ့တျောမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာကို မျောရငျဟိုက သိထားခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး အမှု ဆောငျခြုပျ ဖွဈသူ အကျဝုဒျဝကျဒျက နောကျထပျ ကှငျးလယျ ကစားသမားတှေ ထပျပွီးချေါယူပေးဖို့ မသခြောတာကွောငျ့ ဖရကျဒျကို လကျခံခဲ့တာဖွဈတယျလို့ လညျးအဆိုပါ သတငျးစာကဆိုပါတယျ။
တကယျတမျးမှာလညျး ဖရကျဒျဟာ အဆိုပါ နှဈ နှရောသီ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲဝငျ ဘရာဇီးလျအသငျးမှာ တမိနဈတောငျပါဝငျခှငျ့ မရခဲ့သလို ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာလညျးထငျထားခဲ့တဲ့ အတိုငျးပဲ ရုနျးကနျနခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။သူဟာ မျောရငျဟိုလကျထကျနောကျဆုံးကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ၆ပှဲမှာတပှဲသာပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ သလို ဆိုးလျရှားလကျထကျမှာပါ ပှဲထှကျခှငျ့တနရောအတှကျ မသခြောသေးတာဖွဈပါတယျ။
သူ့အသငျးရဲ့ ကှငျးလယျလူ ဖရကျဒျဟာ
အခွအေနတှေကေို အလှညျ့အပွောငျး လုပျနိုငျစှမျးရှိတယျလို့ ယုံကွညျနပေုံပါပဲ။မကွာသေးမီက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ဆိုးလျရှားက –
” ယူကရိနျး လိဂျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမား တဦးက အင်ျဂလနျ မွကေို
ရောကျစမှာ အနညျးငယျ ရုနျးကနျရ မှုကို ကွုံတှရေ့မယျဆိုတာကို ခငျဗြားတို့လညျး အံ့အားမသငျ့လောကျဘူးလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး သူ့ရဲ့ ပါရမီကို ကြှနျတျောတို့သိနားလညျပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကုနျခါနီးမှာ ဖရကျဒျက အသငျးအတှကျ ကြှနျတျောတို့ကို ဘာတှေ ပေးစှမျးနိုငျတယျဆိုတာမွငျထားပွီးပါပွီ။
PSG ၊ အာဆငျနယျ၊ မနျစီးတီးတို့နဲ့ ပှဲတှမှောဖွဈပါတယျ။သူ ဟာအခုရာသီမှာ ခွစှေမျးပိုငျးနောကျတဆငျ့မွငျ့တကျဖို့
သူဟာ အခုရာသီကွို ကာလတှအေတှငျး
မှာတော့ လကျထပျပှဲ အခမျးအနားအတှကျ ၁၀ရကျ အိမျပွနျထားခဲ့ပါသေးတယျ။ဒါပမေယျ့ လညျး ဒီကိစ်စဟာ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးကို အကွာကွီး ရုနျးကနျစရေဖို့ မဖွဈစလေောကျပါဘူး “လို့ပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဘရာဇီးလ်သား ဖရက်ဒ်ကို ခေါ်ယူရာမှာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ ဆန္ဒ တကယ်ကောပါဝင်ခဲ့လား ?
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နွေရာသီဈေးကွက် အတွင်း မှာကွင်းလယ် လူ ဖရက်ဒ်ကို ရှက်တာ ဒိုးနက်စ်အသင်းကနေ ခေါ်ယူထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဘရာဇီးလ်သားဟာ အခုချိန်အထိ အိုးထရက်ဖို့ဒ် မြေမှာ ခြေစွမ်းကောင်းပြသနိုင့်ခင်း မရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ယူကရိန်းမြေမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဖရက်ဒ်ကို ခေါ်ယူဖို့ အခြားဥရောပအချို့ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပြီး စုစုပေါင်း ပေါင် ၅၂သန်းအထိတောင်ပေးချေထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုတန်ကြေးနဲ့ ထိုက်တန်မှု မရှိတဲ့ ကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမှန် စင်စစ် မော်ရင်ဟို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖရက်ဒ်ကို ကြိုက်နှစ် သက်ခြင်း မရှိပဲ အသင်းကနေ ခေါ်ယူပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ The Atletic သတင်းစာကဆိုပါတယ်။ဖရက်ဒ်ဟာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ သင့်တော်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မော်ရင်ဟိုက သိထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အမှု ဆောင်ချုပ် ဖြစ်သူ အက်ဝုဒ်ဝက်ဒ်က နောက်ထပ် ကွင်းလယ် ကစားသမားတွေ ထပ်ပြီးခေါ်ယူပေးဖို့ မသေချာတာကြောင့် ဖရက်ဒ်ကို လက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ လည်းအဆိုပါ သတင်းစာကဆိုပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာလည်း ဖရက်ဒ်ဟာ အဆိုပါ နှစ် နွေရာသီ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင် ဘရာဇီးလ်အသင်းမှာ တမိနစ်တောင်ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့သလို ယူနိုက်တက် အသင်းမှာလည်းထင်ထားခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ မော်ရင်ဟိုလက်ထက်နောက်ဆုံးကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ၆ပွဲမှာတပွဲသာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ သလို ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာပါ ပွဲထွက်ခွင့်တနေရာအတွက် မသေချာသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖရက်ဒ်ဟာ
အခြေအနေတွေကို အလှည့်အပြောင်း လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ယုံကြည်နေပုံပါပဲ။မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဆိုးလ်ရှားက –
” ယူကရိန်း လိဂ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမား တဦးက အင်္ဂလန် မြေကို
ရောက်စမှာ အနည်းငယ် ရုန်းကန်ရ မှုကို ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့လည်း အံ့အားမသင့်လောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ ပါရမီကို ကျွန်တော်တို့သိနားလည်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်ခါနီးမှာ ဖရက်ဒ်က အသင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေ ပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာမြင်ထားပြီးပါပြီ။
PSG ၊ အာဆင်နယ်၊ မန်စီးတီးတို့နဲ့ ပွဲတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ ဟာအခုရာသီမှာ ခြေစွမ်းပိုင်းနောက်တဆင့်မြင့်တက်ဖို့
သူဟာ အခုရာသီကြို ကာလတွေအတွင်း
မှာတော့ လက်ထပ်ပွဲ အခမ်းအနားအတွက် ၁၀ရက် အိမ်ပြန်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် လည်း ဒီကိစ္စဟာ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းကို အကြာကြီး ရုန်းကန်စေရဖို့ မဖြစ်စေလောက်ပါဘူး “လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။